SOMALITALK - Maqaallo
Caqabadaha had iyo jeer ka horyimaadaa Ardeyda Soomaaliyeed, ee waxbarashada u doonta Qurbaha
Qoraalkii & Qalinkii
Marka hore mahad idilkeed waxaa iska leh Allaah, naxariis iyo nabad gelyana Rasuukeenii ayeey korkiisa ahaatay. Kadib akhristayaasha sharafta lahow iga gudooma salaanta Islaamka ( A.C.W.W ).
Ardeyda Soomaaliyeed weligood waxaa caado u ahaan jirtay inay waxbarasho u raadsadaan waddamo kala duwan haddey noqoto Yurub, Ameerika, Carabaha, Hindiya, Pakistan, iyo weliba meel alla iyo meeshii ay ka heli karayeen waxbarasho. Waxyaabaha ku kalifi jiray ardeydaas inay waxbarasho u raadsadaan qurbaha waxaa ugu wacnaa arimo baddan oo ay ka mid ahaayeen : -
Deeq waxbarasho oo lasoo siin jiray dowladdii Soomaaliyeed.
Waxbarashadii ama jaamacadihii ku yiil waddanka oo aan ku fileyn ardeydii kasoo bixi jirtay dugsiyadii sare ee waddanka, markaasna kuwii loo heli kariyey ay waalidkood u soo dirsadaan dibadda si ay wax usoo bartaan.
Ardey iskood ay u dabiraan waalidkooda, oo mar walba la jeclaa carurrtooda inay dibadda wax kusoo bartaan.
Kuwo markey qurbaha tageen ay ku dhalatay inay waxbartaan.
Iyo kuwa waqtigan xaadirka ah, waddamadii ay u soo qaxeen wax ka barta.
Ardeygu si kastaba haku yimaadee waxbarasho dibadda ah, meel walbuu joogo, haba ku kala badnaadeenee waxa had iyo jeer lasoo dersi jiray caqabado baddan, oo qaarkoodna ay ardeyda iyaga isugu wacnaayeen, qaarkoodna ay aheyd arin ayan ku tala gelin oo lasoo darastay. Haddaba arinta aan maanta doonayo inaan diirada ku saaro, waa waxbarashadii ardeydii Soomaaliyeed xilligii ay jirtay Dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waliba waxa aan doonayaa inaan Tusaale u soo qaato waddanka India oo ahaa runtii waddan aan wax baddan kala socday, kana ahaan jiray arday, runtiina aan oran karo wuxuu ahaa waddan ay tiro aad iyo aad u baddan oo arday Soomaaliyeed ah ay wax ku baran jireen.
India oo ka mid ah waddamada dunida saddexaad kuwooda ugu hormarsan, ayaa waxa ay leedahay waxbarasho aad iyo aad u hormarsan, taasoo u suurto gelisay in ay magaalo walba leedahay jaamacado u gaar ah iyo weliba colleges aad iyo aad u tiro baddan. Waxey sidoo kale India ku caan aheyd Cimilo wanaagsan iyo nolol aad iyo aad u wanaagsan marka laga fiiriyo ardeyga Ajnabiga ah ee u soo raadsaday waxbarasho. Taasoo keentay in ardey fara baddan oo kakala yimid waddamo fara baddan sida Falastiin, Suudaan, Soomaaliya, Ciraaq, Nayjeeriya, Kenia, Itoobiya, Jordan iyo qaar kaloo fara baddan ay soo jiidato waxbarashada iyo noloshaas cajiibka ah.
Ardeyda soomaaliyeed ee waxbarashada u soo raadsaday India waxa ay xoogoodu soo bilaawdeen sanadihii Sideetameeyadii, kuwaasoo aad wax uga baran jiray magaalooyinka Puna, New Delhi, Aligarh, Hyderabad, Madras, Banglore, Chandigarh, Simla, Japalpur, Aurangbad, Bombay iyo magaalooyin kaloo fara baddan. Ardeydaas waxey u badnaan jireen arday laga biilo waddamadii khaliijkaa oo waagaas aad iyo aad looga shaqeysan jiray. Waxaa kaloo jiray arday ay reerahoodu toos uga soo biilaan gudaha waddanka mase badneyn, sidoo kale waxaa jiray arday ku yimid ama helay deeq waxbarasho iyaguna ma badneyn.
Ardeyda Soomaaliyeed ee xilliyadaas wax ka baranayay India oo runtii aad iyo aad uga faa�ideystay fursadahaas ay heleen, tiro aad u baddana ka qalinjabiyay jaamacadahaas, ayaa haddana waxaa jiray tiro kale oo aad iyo aad u fara baddan oo nasiibku u diiday inay waxbarashadooda sii wataan ama ku guuldareystay. Sababaha arimahaas ugu wacan ayaa waxaa ka mid ahaa kuwa soo socda: -
Diyaar garow la�aan: - Ardeyda Soomaaliyeed qaarkood oo aan diyaar u aheyn inay wajahaan nolosha cusub ee uga bilaabaneysay waddamadii ay waxbarashada u soo doonteen, hadey noqoto xag waxbarasho, xag isdabirid iyo isku kalsoonaan ba leh.
Luqadda:- Ardeydii waagaas wax ka baraneysay India oo u badnaa ardeydii wax ku soo bartay luqada Soomaaliga, ayaa iyaduna waxa caqabad kale ku ahaa sidii ay u la qabsan lahaayeen luqadii ingiriiska iyo qaabkii wax looga baranayay India.
Sabir iyo dulqaad la�aan,: - Ardeyda Soomaaliyeed oo intooda baddan ay ku yareyd dulqaadka iyo sabirka, taasoo ay ku adkeyd inuu ku sabro haddii uu sanadka hore ay ku adkaato waxbarashada, inuu ku celiyo sanadaha kale. Halka ardeyda ka kala yimid waddamada kale aad arkeyso kuwo ay ku aadato shahaadada 1aad ee jaamacadd ama Bachelorka muddo ka baddan 6 � 7 sano.
Dhaqaale xumo:- Sidaan ku soo sheegay xagga hore, ardeyda Soomaaliyeed baddankooda waxaa laga soo biili jiray waddamadii khaliijka, kuwaas oo arday baddan ay lasoo gudboonaantay in ay waayaan biilkii kadib markii dadkii soo biili jiray ay shaqadii ka dhamaatay ama waddanki ay joogeen laga tarxiilay, taasoo ardeyga ku kalifi jirtay inuu isaga tago waddanki uu joogay.
Aaditaankii Qaxootinimo:- Intii la joogay India caqabaadka ugu waaweyn ee ardeyda soo wajahay ayaa wuxuu ahaa, in loo sii cararayey waddamdii qaxootinimada leysga dhiibi jiray sida Kanada oo aad iyo aad looga galeyay India, oo ardeygii baxaba uu barakicinayey ardeydii kale.
Isku xirnaan la�aan:- Ardeyda waxaa kaloo caqabad ku aheyd iyagoo aad u kala daadsanaa, oo aan isku xirneyn, taasoo sababi jirtay in ardey baddan ay waayeen cid kala talisa dhibaatooyinkii soo wajahay ama cid la qeybsata.
Garasho la�aan ujeedadii loo yimid:- Waxaa sidoo kale jiray arday aan fahamsaneyn hadafkii iyo ujeedadii ay u yimaadeen qurbaha kuwaasoo waqti baddan uu kaga lumay sheeko maalaa yacni ah iyo balwado kale.
Dhibaatooyinkaas iyo kuwo kaloo fara baddan ayaa ahaa kuwa asalka u ahaa in arday baddan ay gaari waayaan hadafkii ama ujeedadii ay u yimaadeen India. Inkastoo ay jireen Arday fara badan oo aad iyo aad uga tilmaamnaa Collegyadii ay wax ka baran jireen, oo dhigay record�s fara baddan, haddana waxa ka sii badnaa inta dhex ku dhuntay ay soo wajahaan Dhibaatooyinkaas aan soo tilmaamay.
Nasiib wanaag ardeyda hadda wax ka barata India waxaad moodaa inay ka faa�ideysteen waayaha iyo taariikhda oo waxaad maqleysaa magaalo hebla oo laga sameeyaya urur ardeyda Soomaalida ah. Annaga waagaas wey jireen isku dayo fara baddan, laakiin nasiib darro waxaa ka qaalib noqday caadifadii qabiilka. Waxyaalaha ugu wanaagsanaa ee ardeyda waagaas isu keeni jiray wuxuu ahaa Ciyaarihii kubbadda cagta, kuwaasoo runti mar marka qaar soo celin jirtay qiirada Soomaalinimada, guulo la taaban jirayna kasoo hoyn jiray Ciyaarihii ardeyda Ajnabiga ahaa. Sida kooxihii ka dhisnaa magaalooyinka Puna, New delhi iyo Aligarh.
Ugu danbeyn waxaan maqaalkeyga ku soo afjarayaa, in ardeyda Soomaaliyeed ee wax ka kala barata dunida daafaheed ay waqtigood ka faa�ideystaan, muujiyaana isku xirnaan iyo wada shaqeyn taasoo u sahleysa wax yaalo fara baddan oo ka hor imaan lahaa. Isku daya inaad wanaaga isaga dayataan, kiina dhibaateysan aad caawisaan, kan xunna aad waanisaan, oo aydaan ku ceebeyn xumaanta uu ku jiro. Waxaa Soomaaliya laga aaminsan yahay fikrado baddan oo xun xun, isku daya inaad soo celisaan sharafti iyo karaamadii Soomaali ay laheyd. Qof walbow ku xisaabtan inaad tahay safiir u maqan Soomaali, maadaama aad tihiin ardeydii waddanka wax u soo baraneysay, noqon lahaana kuwii berito la wareegi lahaa maamulka waddanka.
Faafin: SomaliTalk.com | Mar 09, 2008
AFEEF: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan, kana tarjumi meyso aragtida SomaliTalk.com.
BOOQO BOGGA MAQAALLADA DADWEYAHA EE BISHAN...
DoodFuran: Jawaabaha Dadweynaha..... Guji...